သမတ္တသိန်းစိန်သို့ (ပေးစာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » သမတ္တသိန်းစိန်သို့ (ပေးစာ)
- Mara Yu
Posted by Mara Yu on Sep 5, 2012 in Complaint / Claim | 13 comments
သမ္မတကြီးနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီ စီးပွားရေးများကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များမှ အချောင် လိုချင်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုသော အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ ခင်ဗျား- တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလီ အစ္စလမ်များ မည်သို့ စီးပွားရှာ ချမ်းသာကြပါသနည်း။ ၎င်းငွေကြေး ဥစ္စာများ တရားဝင်ငွေများဟု လက်ခံပါသလား။ ရခိုင်ပြည် သံင်္ဃာများကို စွပ်စွဲပြောဆို တိုက်ခိုက်တာဟာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲကို တမင်ဖန်တီးပြီး နိုင်ငံနောက်ပြန်လှည့်သွားချင်တဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးမရှိ ဘာသာလူမျိုးလည်းမတူတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ မနေချင်ရင် နေချင်တဲ့ နိုင်ငံ သားပေါ့။ ကုလားတွေကို ကြိုက်လို့ခေါ်ထားတဲ့ အထဲမှာ တို့တိုင်းရင်းသားတွေ လုံးဝ(လုံးဝ) မပါဘူး။ အာဏာရှင်တစ်စုသာ ပါတယ်။ လူသားဆန်တဲ့ နှလုံးသားအမြင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ရေ။ နင် UK မှာ မြေ (၁) လက်မ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါ သလား။ နင်တို့ ကုလားတွေ နိုင်ငံသား မဟုတ်ဘဲ မြေပိုင်ရှင် အဆောက်အဦ ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင် လူတစ်စုနှင့် ပေါင်းပြီး မဟုတ်တာ အကုန်လုပ်ပြီး ငွေကြေးဗန်းပြကာ တိုင်းရင်းသူတွေကို မူဆလင်သွင်း ချာရီခြုံ ခိုင်းနေတာ လူသားဆန်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ကုလားတွေလား။ နင်တို့ မူဆလင်တွေဟာ တို့တိုင်းရင်းသားတွေထက် အခွင့်ထူးခံဆိုတာ ငြင်းမရပါ။ YANGOON မြို့ရဲ့ ရောင်စုံ မီးပန်းတွေအောက်မှာ နင်တို့ ဘင်္ဂလီ မူဆလင်တွေကြီးပဲ မှောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေရတာ တို့တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ လူသားဆန်တဲ့ နှလုံးသားဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်သူတွေ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်နေသလဲ။ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်ဘာသာ ဝင်တွေ အထီးကျန်အောင် လုပ်နေသလဲ။ လူသတ္တဝါတွေကို ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာဝင်တွေက သနား ကြင်နာမှုကင်းမဲ့စွာ သတ်ဖြတ်နေသလဲ။ သမ္မတကြီးခင်ဗျား။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေကို တန်းတူရည်တူ အခွင့်ရေးမပေးဘဲ ကြောက်လို့ ပြောတဲ့စကားတွေပါ။ မတူညီတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ခြားနားဆက်ဆံခံနေသူတွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ အစ်ကိုတစ်ယောက်က ညီအပေါ် မှာ ငှဲ့ညှာသနား ကြင်နာမှုတွေ လေးစား ဝေမျှမှုတွေ ပေးနေပါသလား။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆီက သံယံဇာတ ကိုရောင်း အစ်ကိုက စား ညီတွေ ငတ်နေတာကို မြင်နေသိနေပေမဲ့ ဥပေက္ခာပြုနေတာ ကျွန်တော်တို့ ညီနောင် တိုင်းရင်းသားတွေ ဝဋ်ကြွေးလား။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံရေးကစားကွက်ထဲမှာ သားကောင် ဖြစ်ရတော့မှာလား။ ကုလားနှင့် ကစားပြီးတော့ တရုတ်နှင့် ကစားဖို့ လုပ်နေတာ တိုင်းရင်းသား ဗမာ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ သတိရှိပြီး သတ္တိမွေးပြီး အဆင်သင့် စောင့်နေကြပါလို့ ပြောကြားလိုက်ပါရစေ။ မာရယု
About Mara Yu
Mara Yu has written 1 post in this Website..
View all posts by Mara Yu →
သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံကြပါစို့ အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကြပါစို့
မွတ်စလင်တိုင်းပြည်မှာ အခြားဘာသာဝင်တွေ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ခင်ဗျားတို့နေနေသလို နေလို့ရလား
အကောင်းဆုံးက မနေချင်ရင် ထွက်သွားကြပါ ကလိင်စေ့ငြမ်းဆင် ကလီကမာ နဲ့နယ်မြေသိမ်းဖို့မလုပ်ပါနဲ့
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သို့ (ပေးစာ) လို့ပျင်ဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
သမတ္တသိန်းစိန်သို့ (ပေးစာ) လို့ရေးဘာ
( ခင်ဗျားတို့ဟာကလည်း အင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီးဖင်ကျယ်ခြင်ရင်လည်း သမ္မတလောက်တော့
စာလုံးပေါင်းတတ်အောင် အရင်လုပ်ဂျဘာအုန်း )
သူများဂို ဖင်ဝင်ကျယ်တာ ကျုပ်ဘာဖင်ဂေါင်းပွသွားဒယ်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သို့ (ပေးစာ) လို့ရေးဘာ
မာမီပုကို သတ်ပုံအဖွဲ့နဲ့ အော်မေ့ဂိုဏ်းက ကြိုဆိုပါတယ်။
ပို့ စ်တင်တဲ့နာမည်က မယားတရူး ဟုတ်စ
” လူသားဆန်တဲ့ နှလုံးသားအမြင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ရေ။
နင် UK မှာ မြေ (၁) လက်မ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါ သလား ”
UK နှင့် ဝေနှင်းပွင့်သုန် တော့ မသိဘူး ။
အဘတို့ သြဇီ နှင့် အမေရိက မှာတော့ ၊
နိုင်ငံခြားသားတွေ မြေပိုင်ခွင့် ရှိတာပဲ ။
ကိုယ့်ငွေက ဖြူဖို့တော့ လိုတာပေါ့ ။
ဓါးပြတိုက် ၊ ဘိန်းစိုက်ပြီး ရလာတာ မဟုတ်ရဘူးလေ ။
အမေရိက မှာဆိုရင် ဒေါ်လာ ငါးသိန်းတန် မြေဝယ်ရင် ၊
မြေပိုင်နေသေးသရွေ့ အမေရိက မှာနေခွင့်ပါပေးတယ်တဲ့ ။
Dear Mara Yu,
Your letter is partly right and partly wrong. Successive governments in Myanmar discriminate minority people in different manners though they preached national unity. Regarding current problems, there is two part , the peaceful settlement for current commotions and hostilities between residences of Rakhine state and not to make the issue religious or racial as it will make things worse. Though myselfapure Buddhist and Myanmar, I strongly agree that we need to haveawin-win solution to settle current problems in Rakhine and that we should not exclude humanitarian considerations in solving this. Though the so called returneees in Rakhine were most likely to be the results of ineffective immigration/ border law enforcement institutions’ poor regulatory performance, decades have passed and there might probably people who were born and raised in Rakhine, as 2nd and third generation illegal immigrants. Those people were also human and they havearight to carry on their livelihood inalaw-abiding manner and their lives must be safe and secure while they must not threaten peace, law and order and interest of our local citizens including Rakhines in the state.We need broad perspective and prudence
extreme nationalism and narrow-mindedness won’t bringasustainable peace in Rakhine state and residences of the state, regardless of races or religions should seek to live and prosper peacefully in suchaway that all residences can carry on their livelihood without posingathreat to the interests of the others. There is no immediate way to remove/replace those returnees from Rakhine and probably we’ll have to let them reside for those who were already there regardless of their citizenship ( cannot deport them) all residence must findaamicable solution that ensureawin-win situation for all parties concerned.
Though there were AL-quidas and some fundamentalist and terrorists , we should not say that Muslims were terrorists as this isatotally wrong idea.So, let’s stop linking the issue with religions and racial hatred.
မြန်မာလိုလေးလည်းရေးကြပါဦး English လိုရေးထားတော့မဖတ်တက်လို့ပါ။ English က ကမ္ဘာသုံးစကားဆိုပေမယ့် ။ မြန်မာစာဟာလဲ ကျနော် တို့ရဲ့ဘာသာစကားပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေဖက်မယ့်စာကို မြန်မာလိုပဲတင်စေချင်ပါတယ်။ English လိုတင်ခင်တယ်ဆိုရင်လဲ မြန်မာလိုလေးပါတွဲးပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးစေလိုပါတယ်။
တောက်လျှောက် dear နေ ဟိုဖက်က(မယားရှုး)..က.. ဖတ်တတ်ဘူးဗျဆို..ပြီးရော..ရေးထားရတာတွေ….
စာရေးသူ Mara Yu ရဲ့အဆိုကိုထောက်ခံပါတယ်။